Native Kushambadzira muChinyorwa | Martech Zone
Chitatu, December 12, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Izvo dzimwe nguva zvakaoma kuenderana neese ma kushambadzira jargon mazuva ano, asi heino imwe iyo yaunotanga kunzwa… kushambadzira kwazvino.
izwi kushambadzira kwazvino iri kutora kukwezva kwakanyanya munharaunda yekushambadzira yepamhepo, asi dudziro yayo yanga ichivhiringidza kusvika zvino. Kushambadzira kwevanhu vemunyika hakusi kushambadzira. Panzvimbo iyoyo, iyo inopa kukosha kune chero peji iyo yainonongedza nekuvandudza mushandisi ruzivo uye nekuwedzera kukosha kwevatengi Dzazvino dhata dzinosimbisa kuti vaparidzi, vamiririri, vashambadziri, uye vanoita mari vanotenda kuti chiziviso chekushambadzira ndicho chikamu chiri kukura nekukurumidza mubhizimusi rekushambadzira online.
Solve Media yakanyora a whitepaper kana iwe uchida imwe nzwisiso mukushambadzira kwemuno.
Heano muenzaniso wekushambadzira kwemuno kubva kuSolve Media saiti, iyo CAPTCHA Type-IN:
Tags: CAPTCHA Rudzi-INkushambadzira kwazvino